Umnqweno weHtt ubunzulu | Zonke iinkonzo ze-intanethi
antocara | | nokuVavanyelwa, Reviews
Njengoko besitshilo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, sibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuba sizame Htc umnqweno iintsuku ezimbalwa enkosi ssmobile, Apho ungayifumana ifumaneke ngexabiso elinomtsalane kwaye isimahla ukuba ungayisebenzisa nakubani na. Sishiye wena Umnqweno weHtc unboxing Kwaye namhlanje sikulethela uphononongo oluncinci ngokuthelekisa inqanaba elithile ne Nexus One, kwaye sinikezela izigqibo zethu.
El Htc umnqweno xa kwakubhengezwa sonke sayithiya igama njenge- Nexus One Ukusuka kwi-Htc, uGoogle wayenabo kwaye iHtc ithengise umnqweno. Ukuya kwinqanaba elithile kuyinyani kuba ngokubonakalayo kukho iinguqu ezimbalwa ezikhoyo phakathi kwabo kwaye ngaphakathi ukufana kukhulu ngakumbi.
Njengoko benditshilo, inkangeleko yangaphandle ifana kakhulu naleyo ye- Nexus One, Mhlawumbi Nexus One irhangqwe ngakumbi kwimiphetho yayo kune Htc umnqweno. Iscreen se-capacitive zii-intshi ze-3,7 ezinesisombululo seepikseli ezingama-480 × 800, zezohlobo lwe-Amoled kwaye zijikelezwe ngumda wobhedu onemibala yentsimbi. Emazantsi ngaphambili sifumana uthotho lwamaqhosha esinyithi ebonakalayo kunye noluvo olubonakalayo. La maqhosha kunye nesenzi senzuzo enkulu kwi-Nexus kunye namaqhosha aso okuchukumisa apho kuya kufuneka uchukumise amaxesha ambalwa ukuze baphendule ngokuchanekileyo. Inzwa yokujonga esebenza njengebhola yomkhondo ilunge ngakumbi kokubonisa ubuntununtunu nokusingatha kunebhola eqhelekileyo eziswa ngabanye Iitheminali ze-Android. Ukongeza kumaqhosha angaphambili iifayile ze Htc umnqweno Inecala elinye kunye nezitshixo zokunyusa okanye ukunciphisa ivolumu kwaye kwinxalenye yayo ephezulu sine-on and off.
Umva we Htc umnqweno Sisiqwenga esipheleleyo seplastiki esinokuphuculwa ngandlela ithile kumgangatho. Kuyaphawulwa ukuba umgangatho wekhava ungaphantsi kakhulu kunowe-Nexus One kwaye indlela evula okanye evala ngayo iithebhu ezincinci ngokwenene ziyinkathazo kwaye singazophula ezinye ngaphandle kokufuna. Nangona kuyinyani ukuba asizukuvula ifowuni yonke imihla.
Ngokunxulumene nokunxibelelana komzimba ii Htc umnqweno Ine-3,5 mm jack yokuphuma kwesandi ngaphezulu kunye nezibuko le-usb elincinci emazantsi okutshaja nokunxibelelana nePC.
Ubungakanani be Htc umnqweno Ngokutsho komenzi we-119x60x11,9mm, yi-0,04 mm kuphela engaphezulu kune Nexus One, nangona isesandleni sayo inika imvakalelo yomahluko omkhulu ngakumbi phakathi komnye nomnye, umnqweno weHtc ujongeka ngathi mkhulu. Kodwa ngokuchaseneyo, ukuba sisikwere esincinci ngakumbi kwenza kube lula ukubamba.
Njengoko unokuthelekelela, kwaye ngenxa yobungakanani bescreen, ayisiyo fowuni incinci kodwa ayinkulu kakhulu kwaye ayicaphukisi kwaphela ukuphatha ngesandla okanye ibhatyi okanye ipokotho yehempe, ubunzima bujikeleze iigram ezili-130 kubandakanya nebhetri.
Emehlweni sisiphelo esihle kwaye umda wentsimbi ojikeleze iglasi uyinika isidima esithile ngokuthelekiswa nezinye iifowuni ekubunjweni kwayo isinyithi sikhanya ngokungabikho kwayo.
Ukuba inkangeleko yangaphandle ifana kakhulu phakathi kwe- IHtc Desire kunye neNexus One, kwicandelo lecandelo ukufana kukhulu xa kunokwenzeka. Inkqubo ye- Htc umnqweno unayo Inkqubo yeQualcomm Snapdragon QSD8250 1Ghz Isantya kunye nememori ine-576Mb ye-RAM kunye ne-512Mb yeROM. Apha sinokubakho kuphela umahluko obalulekileyo kwimo yentsimbi phakathi kwezi fowuni, i-64 Mb ye-RAM ethi Htc umnqweno ine ngaphezulu kune Nexus One. Imemori yokugcina iyandiswa ngamakhadi amancinci e-SD anokufikelela kwi-32 GB.
Inonxibelelwano kwiinethiwekhi ze-Wi-Fi 802.11 b / g, iBluetooth 2.0 + A2DP. Njengakwimeko ye Nexus One eya kuthi ihambelane nenethiwekhi ezingama-802.11 n ze-Wi-Fi ngohlaziyo lwesoftware lwexesha elizayo Htc umnqweno Inayo i-chip efanayo kwithiyori iya kuba iyahambelana okoko ifumana olu hlaziyo.
Iinethiwekhi ezinokunxibelelana kuzo zi-3G, ukuya kuthi ga kwi-7,2 Mb / s yokukhuphela kunye ne-2 Mb / s yokulayisha, i-GPRS, i-EDGE kunye ne-GSM / HSPA / WCDMA.
Ikhamera enefayile ye- Htc umnqweno Yi-5 Mpx ene-autofocus kunye ne-flash. Inomsebenzi wokufumanisa ubuso, ukujonga imifanekiso kunye neefoto zepanoram. Nangona siza kujongana nayo kwisithuba esahlukileyo ukuba sinika ingxelo yokuba isoftware yolawulo lwekhamera igcwele ngakumbi kwifayile ye- Htc umnqweno ukuba Nexus One.
Ibhetri inamandla okutshaja ayi-1.400 mAh, athi ngokomvelisi asinike ukuzimela malunga nemizuzu engama-400 kwincoko kwiinethiwekhi ze-GSM / WCDMA kunye neeyure ezingama-350 zokuma kunethiwekhi ye-GSM / WCDMA. Umthamo webhetri ufana nqwa nowe Nexus One kodwa kufuneka kuthiwe ngelixa besikhe savavanya kubonakala ngathi ilawula ukusetyenziswa kwebhetri ngcono. Nangona ukuyithetha ngokuqinisekileyo, isifundo esineenkcukacha ngakumbi kuya kufuneka senziwe.
Umahluko omkhulu ukusuka IHtc Inqwenela ngaphezulu kweNexus One kukuba inesamkeli esakhelweyo nesisebenzayo se-FM. Lo mahluko awunakuba lilize ukuba kuhlaziyo olubonakalayo lokuba i-Nexus iya kusokola, le nxalenye yezixhobo zekhompyutha iyenziwa, kuba ukusilela kukanomathotholo kungumba wesoftware kuphela.
Njengeefowuni zangoku zolu hlobo, inekhampasi, isantya, isivamvo sokusondela, kunye nesenzi sokukhanya esikufutshane.
Ngaphandle kokuya kwimibuzo yesoftware okanye ujongano esiza kubona kwelinye iposti, ifayile ye- Htc umnqweno unezona zixhobo zentsimbi ze- Iitheminali ze-Android kwintengiso. Ukubandakanywa kwamaqhosha omzimba kunye nesenzi sokubamba, ukongeza kummahluko omncinci kwinkunzi yegusha, kodwa umahluko ekugqibeleni, kuyenze ibe namandla ngakumbi kune Nexus One.
Ukuba siyayibona xa ithelekiswa ne-Xperia X10, enye yeempawu ezinkulu Iifowuni ze-Android, isekhona umahluko omkhulu, kule meko, we-Ram phakathi kwenye nenye. Ubungakanani besikrini seXperia X10 inokuba yindawo ekuthandwayo kodwa ii-intshi ezingama-0,3 kubungakanani besikrini kunye ne-3 Mpx umahluko wekhamera xa kuthelekiswa ne-320 Mb ye-RAM ukusuka kwi-Htc Desire yenza isikali, kodwa ngalo lonke ixesha lethu , ngakuye Htc umnqweno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » IHtc Inqwenela ngokunzulu
poof ukubona xa ishiya iorenji kuba amaxabiso aphumileyo alungile
Ndibonile kuphononongo ukuba ikhamera yeLegend, endiyiqondayo iyafana neyoMnqweno, yenza iifoto ezingcono kunezo ze-X10. Okwangoku kwaye une-3Mpx ngaphezulu!
Ii-megapixels ezingakumbi azithethi iifoto ezingcono.
Uphononongo olugqwesileyo, Siyavuyisana
Ndizolinda umnqweno emva koko ...
Ndicinga ngeNkanuko, kodwa kuba ndithanda ukuba nohlaziyo kuqala, ndicinga ukuba ndiza kuthenga i-Nexus One ngoMeyi ngevodafone. Ndiyathemba ukuba amaxabiso ayafikeleleka, nangona amaxabiso abekwe kwiLegend, ndicinga ukuba kuya kufuneka ndihlawule.
Kuya kufuneka ndithathe isigqibo ngesinye kwezi zimbini, into kukuba ndisebenzisa unomathotholo we-fm kakhulu, kwaye kwi-nexus enye ayenziwanga, kukho intetho eninzi malunga nohlaziyo kodwa ayaziwa ukuba iyinyani na okanye imihla, njl.
Enye into kukuba xa i-google nexus iphuma kunye nevodafone, imephu yeGoogle yokuhamba iya kuza ifakwe, apho umnqweno we-htc ungakhange uthethe nto.
Omnye umba ngulo wohlaziyo, kwi-nexus yokuqala baya kuba ngabokuqala ukuyifumana kwaye ayaziwa ukuba ngomnqweno we-htc, baya kuqhubeka nomgaqo-nkqubo ofanayo ne-htc hero.
Luthini uluvo lwakho ??
Phendula kwi gofa
Uhlaziyo aluqinisekiswa yiHtc okanye uGoogle. Yonke indawo yewebhusayithi yesiFrentshi ethi umsebenzisi xa ethatha i-Nexus One kwinkonzo yezobuchwephesha imxelele ukuba izakuhlaziya kungekudala. Ukuhamba kwemephu zikaGoogle, akukho mntu uthethile ngokusemthethweni ukuba izakuzisa eSpain, baphawule ngayo e-UK. Kodwa ukuba beza kuyivula eSpain, iya kuba yeyazo zonke iiterminal ze-Android, ayinanto yakwenza nophawu okanye imodeli, ngumcimbi weengxaki zomthetho kwinkampani yemephu kunye noGoogle. I-Nexus phantse i-100% ngokuqinisekileyo iya kufumana uhlaziyo kuqala. Konke okugqibelele
"Ukubandakanywa kwamaqhosha omzimba kunye nesenzi sokubamba, kunye nokwahluka okuncinci kwenkunzi yegusha, kodwa umahluko nangona kunjalo, kuyenza ibe namandla kuneNexus One."
Ukusukela nini amaqhosha omzimba kunye nesenzi sokubamba esenza into enamandla ngakumbi? Imemori pfff, nokuba yeyiphi, kodwa iyakusebenzela, nokuba yeyiphi, kodwa enye into ibonakala ngathi ayihlekisi kum.
Kuba kusithiwa amaqhosha omzimba aluncedo (into e-subjective), kwaye inyani yokuba ine-trackball ebonakalayo ayinangxaki kuba i-nexus ine-trackball ebonakalayo, akunjalo? Abo bakhetha okwenyama baya kuyibona ngaloo ndlela kunye nabo bayicimayo. siza kuyixobula.
Ndiyathetha, olona loncedo kuphela yi-RAM eyongezelelweyo.
Molo Javier. Ukuba namaqhosha omzimba awathobeli, bendisebenzisa i-nexus enye phantse iinyanga ezintathu kwaye ndiyakuqinisekisa kunye nabantu abaninzi abane-nexus, ukuba amaqhosha okuchukumisa azisa yinto ... luluncedo kwaye lukhulu, loo nto ayithobeli nto inenjongo. Inzwa yokubonakalayo inovakalelo ngakumbi kwaye ithembekile kunebhola ebonakalayo, ndiyatsho kwaye nabanye abantu abaninzi abazamile kuzo zombini iiterminal kwaye ayithobeli nokuba yeyiphi na, iyinjongo ngokupheleleyo. Ukuba uzame zombini iitheminali uya kwazi.
Ukuba umahluko we-64 mb womahluko wenkunzi yegusha ubonakala umncinci kuwe, phantse ungumahluko we-13% kwi-RAM phakathi kwesiphelo kunye nenye. Ndicinga ukuba eli nani lenkunzi yegusha kolu hlobo lwesiphelo lukhulu kakhulu kwaye ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukusetyenziswa okwenziwe yile nkumbulo zizo zonke ezi terminals.
Lilonke ukuba namaqhosha omzimba, inzwa ebonakalayo kunye nenani leenkunzi yegusha ngaphezu komnqweno, yenze ibe namandla ngakumbi, ewe.
I-RAM (64MB) ndicinga ukuba i-HTC iyonyusile ngokuba ne-Sense, oko kukuthi, bafuna ukuba kungaqatshelwa ukuba babeke olunye ujongano ngaphezulu kwe-Eclair. Kwaye ayisiyoncedo, kodwa bayilungelelanisile i-RAM ukuze basebenzise i-Sense (izikrini ezi-7, endaweni ye-5 ye-N1). Ndizidubula ngokufumana uhlaziyo ngaphambili. Yiloo nto ndicinga ukuba Gofa.
Ukuhlaziywa kuya kuba phambi kweNexus, icacile 🙂
@gofa. Ewe, ndingaphantsi okanye ngaphantsi njengawe, andithathi isigqibo phakathi kwaba babini.
Ndiyathanda amaqhosha omzimba weSifiso kunye ne-sensor yayo ye-optical ngaphezu kwamaqhosha okuchukumisa kunye nebhola yeNexus. Ndiyayithanda i-64 MB ngaphezulu ye-RAM enayo iMinqweno (Nangona okwangoku bobabini beneninzi ye-RAM xa kuthelekiswa neentshaba zabo ezinje ngeX10 okanye iMilestone).
Ngokuchasene nokwazi ukuba i-Nexus izakufumana lonke uhlaziyo kuqala kwaye umnqweno uya kuba nawo xa i-HTC igqibile ukulungiselela i-Sense yenguqulo entsha (inokuba ziinyanga njengoko sibona ngeHero) indishiya ndithandabuza ukukhetha Umnqweno. Ngokuqinisekileyo i-Nexus ngokuqinisekileyo iya kuba nerediyo ye-FM kuhlaziyo lwexesha elizayo kuba i-chip iyakuvumela oko, kwaye kukho amarhe okuba inokurekhoda kwi-HD ngolunye uhlaziyo olufana noko kuya kufunyanwa nguMnqweno. Kwaye ngubani owaziyo ukuba iya kuba ne-RAM eninzi egcinelwe uhlaziyo lwamva njengoko kwenzekile ngeHTC HD2.
Kwimeko yam, ndicinga ukuba ekugqibeleni ndiza kuthatha isigqibo ngeNexus, kuba nangona umnqweno unokuhlaziywa ngeROM ephekwe kwakamsinya emva kokuba i-Nexus ihlaziyiwe, ubuncinci ixesha lesiqinisekiso sesiphelo andifuni ukuba babhenele kubo ngenxa yokoyika ukulahleka. Isigqibo sokugqibela siyakuthathwa xa ixabiso lezi zimbini zisaziwa ngokuphatheka kweVodafone (nangona ndinoloyiko lokuba amaxabiso azakufana kwaye intandabuzo iya kuqhubeka).
Inye into ebalulekileyo endicinga ukuba khange ixoxwe, kwaye leyo yingxolo yokucima imakrofoni ephethe i-N1. Luphuculo olukhulu komnye wemisebenzi ephambili eya kuba yifowuni elungileyo.
Ngokuphathelele kwibhola, inyani kukuba ngamanye amaxesha ayichanekanga, kodwa inyani yokuba iyakhanyisa ukukwazisa ngemiyalezo ephosiweyo okanye iifowuni iluncedo kakhulu (kungekudala inemibala eyahlukeneyo)
Ngokubhekisele kuhlaziyo, i-HTC sele indishiyile ilenga amatyeli ambalwa… ..
uyeke ukukhala xa bekufowunela ujike?
Ukuba uRoberto uyayenza.